၁၆ ဇူလိုင်၊ ၂၀၂၀
မဲခေါင်မြစ်ဝှမ်းနိုင်ငံ တခုဖြစ်တဲ့ ဗီယက်နမ် နိုင်ငံ Soc Trang ဒေသမှာ ရေရှားပါးမှုဖြစ်။
အင်ဒိုချိုင်းနား ကျွန်းဆွယ်ကို မုတ်သုံမိုး စတင်ဝင်ရောက်ချိန်မှာပဲ မဲခေါင်မြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက်က လယ်သမားတွေနဲ့ ငါးဖမ်း တံငါ တွေ မိုးကို မျှော်နေကြရပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ မဲခေါင်မြစ်ကြီးဟာ ဥတုရာသီ ပြောင်းလဲမှုနဲ့ မြစ်တလျှောက် ဆည်တမံတွေ တည်ဆောက် တာကြောင့် ဒီနှစ် မြစ်ရေမျက်နှာပြင်က နှစ် ၆၀ အတွင်း အနိမ့်ဆုံးအဆင့်ကို ရောက်လို့ သွားခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာ၊ လာအို၊ ထိုင်း၊ ကမ္ဘောဒီးယားနဲ့ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွေထဲ ဖြတ်ကျော်စီးဆင်းတဲ့ မဲခေါင်မြစ် မြေနိမ့် မြစ်ဝှမ်းဒေသမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၉ ခုနှစ် မေလနဲ့ နှိုင်းစာရင် ဒီနှစ် မေလ မိုးရွာသွန်းမှုက ၆၈ ရာခိုင်နှုန်း လျော့ကျသွားတယ်လို့ မဲခေါင်မြစ် ကော်မရှင်က ပြောပါတယ်။ ဇွန်လ မှာတော့ မနှစ်ကထက် ၇၃ ရာခိုင်နှုန်း ပိုနည်းသွားလို့ အခြေအနေ ပိုဆိုးသွားခဲ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိုးခေါင်မှု တာရှည်တာ၊ ရေကြီးတာနဲ့ ရာသီဥတု ပြင်းထန်လွန်းတာတွေဟာ မဲခေါင် မြေနိမ့် မြစ်ဝှမ်းနိုင်ငံတွေ အဓိက ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ပြဿနာတွေ ဖြစ်တယ် လို့လည်းကော်မရှင် နှစ်စဉ် အစီရင်ခံစာမှာ ပါရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင်၊ စားဝတ်နေရေးအတွက် ​မဲခေါင်မြစ်ကြီးကို မှီခိုအားထားနေရတဲ့ လူ သန်း ၇၀ အတွက်လည်း စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေး ပြဿနာ ထွက်ပေါ် လာခဲ့တယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့ ပစိဖိတ် သမုဒ္ဒရာထဲက EL NINO ရေစီးကြောင်းလိုပဲ အိန္ဒိယ သမုဒ္ဒရာထဲ DIPOLE လို့ခေါ်တဲ့ ဥတုအခြေအနေက မိုးခေါင်တာနဲ့ ဆက်စပ်နေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ကမ္ဘာကြီး ပူနွေးလာတက လည်း အဲဒီ DIPOLE က အခြေအနေကို ပိုပြီး ဆိုးရွား စေတာကြောင့် အရင်က အိန္ဒိယ သမုဒ္ဒရာထဲက DIPOLE က ၁၇ ကျော်မှာ တခါပေါ်တာ ဖြစ်ပေမဲ့ အခုတော့ ၆ နှစ်ကျော်မှာ တခါ ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ သိပ္ပံ ပညာရှင်တွေက ခန့်မှန်း တွက်ချက်နေပါတယ်။
ဥတုရာသီ ပြောင်းလဲတာနဲ့ မဲခေါင်မြစ်ပေါ် ဆည်တမံ တည်ဆောက်တာနှစ်ခုကို ဒွန်တွဲလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ သိပ်ကို အင်မတန်များတဲ့ အခြေအနေ ရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။
မဲခေါင်မြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက် တည်ဆောက်ဖို့ စီစဉ်ထားတဲ့ ဆည်တမံ စုစုပေါင်း ၁၄၀ လောက်ရှိပြီး အများစုက တရုတ်နိုင်ငံထဲမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြစ်ကြေတစ်လျှောက် ရေနည်းရတာက ဆည်တွေ တည်ဆောက်လို့ဆိုတဲ့ အချက်ကို တရုတ်နိုင်ငံက ငြင်းဆိုထားပါတယ်။
Eyes On Earth INC သုတေသန ကုမ္ပဏီကလည်း ဧပြီလတုန်းက တရုတ်နိုင်ငံဟာ မဲခေါင်မြစ် သဘာဝအတိုင်း စီးဆင်းမှုကို ကန့်သတ်ပြီး တာတမံတွေနဲ့ မြစ်ရေကို သိုလှောင်ခဲ့ တယ်လို့ အစီရင်ခံထားပါတယ်။ အဲဒီ အစီရင်ခံစာကို တရုတ်တို့ လက်မခံပဲ ငြင်းဆို ထားပေမဲ့ မနှစ်က မုတ်သုန်ရာသီမှာ မဲခေါင်မြစ် ရေမျက်နှာ ပြင်က ၂. ၅ မီတာ သာရှိတာမို့ ပုံမှန် ၇.၅ မီတာရဲ့ ၃ ပုံ ၁ ပုံသာ ရှိပါတယ်။
မွနျမာအပါအဝငျ မဲခေါငျမွဈဝှမျးနိုငျငံတှမှော မိုးရှာသှနျးမှုလြော့ကြ
အငျဒိုခြိုငျးနား ကြှနျးဆှယျကို မုတျသုနျမိုး စတငျဝငျရောကျခြိနျမှာပဲ မဲခေါငျမွဈကွောငျးတဈလြှောကျက လယျသမားတှနေဲ့ ငါးဖမျး တံငါ တှေ မိုးကို မြှျောနကွေရပွီ ဖွဈပါတယျ။ မဲခေါငျမွဈကွီးဟာ ဥတုရာသီ ပွောငျးလဲမှုနဲ့ မွဈတလြှောကျ ဆညျတမံတှေ တညျဆောကျ တာကွောငျ့ ဒီနှဈ မွဈရမေကျြနှာပွငျက နှဈ ၆၀ အတှငျး အနိမျ့ဆုံးအဆငျ့ကို ရောကျလို့ သှားခဲ့ပါတယျ။
မွနျမာ၊ လာအို၊ ထိုငျး၊ ကမ်ဘောဒီးယားနဲ့ ဗီယကျနမျနိုငျငံတှထေဲ ဖွတျကြျောစီးဆငျးတဲ့ မဲခေါငျမွဈ မွနေိမျ့ မွဈဝှမျးဒသေမှာ ပွီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၉ ခုနှဈ မလေနဲ့ နှိုငျးစာရငျ ဒီနှဈ မလေ မိုးရှာသှနျးမှုက ၆၈ ရာခိုငျနှုနျး လြော့ကသြှားတယျလို့ မဲခေါငျမွဈ ကျောမရှငျက ပွောပါတယျ။ ဇှနျလ မှာတော့ မနှဈကထကျ ၇၃ ရာခိုငျနှုနျး ပိုနညျးသှားလို့ အခွအေနေ ပိုဆိုးသှားခဲ့ရပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ မိုးခေါငျမှု တာရှညျတာ၊ ရကွေီးတာနဲ့ ရာသီဥတု ပွငျးထနျလှနျးတာတှဟော မဲခေါငျ မွနေိမျ့ မွဈဝှမျးနိုငျငံတှေ အဓိက ကွုံတှနေ့ရေတဲ့ ပွဿနာတှေ ဖွဈတယျ လို့လညျးကျောမရှငျ နှဈစဉျ အစီရငျခံစာမှာ ပါရှိပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ၊ စားဝတျနရေေးအတှကျ မဲခေါငျမွဈကွီးကို မှီခိုအားထားနရေတဲ့ လူ သနျး ၇၀ အတှကျလညျး စားနပျရိက်ခာဖူလုံရေး ပွဿနာ ထှကျပျေါ လာခဲ့တယျလို့လညျး ဆိုပါတယျ။
သိပ်ပံပညာရှငျတှကေတော့ ပစိဖိတျ သမုဒ်ဒရာထဲက EL NINO ရစေီးကွောငျးလိုပဲ အိန်ဒိယ သမုဒ်ဒရာထဲ DIPOLE လို့ချေါတဲ့ ဥတုအခွအေနကေ မိုးခေါငျတာနဲ့ ဆကျစပျနတေယျလို့ ပွောပါတယျ။ ကမ်ဘာကွီး ပူနှေးလာတက လညျး အဲဒီ DIPOLE က အခွအေနကေို ပိုပွီး ဆိုးရှား စတောကွောငျ့ အရငျက အိန်ဒိယ သမုဒ်ဒရာထဲက DIPOLE က ၁၇ ကြျောမှာ တခါပျေါတာ ဖွဈပမေဲ့ အခုတော့ ၆ နှဈကြျောမှာ တခါ ဖွဈလာလိမျ့မယျလို့ သိပ်ပံ ပညာရှငျတှကေ ခနျ့မှနျး တှကျခကျြနပေါတယျ။
ဥတုရာသီ ပွောငျးလဲတာနဲ့ မဲခေါငျမွဈပျေါ ဆညျတမံ တညျဆောကျတာနှဈခုကို ဒှနျတှဲလိုကျတဲ့အခါမှာတော့ သိပျကို အငျမတနျမြားတဲ့ အခွအေနေ ရောကျရှိသှားခဲ့ပါတယျ။
မဲခေါငျမွဈကွောငျးတဈလြှောကျ တညျဆောကျဖို့ စီစဉျထားတဲ့ ဆညျတမံ စုစုပေါငျး ၁၄၀ လောကျရှိပွီး အမြားစုက တရုတျနိုငျငံထဲမှာ ဖွဈပါတယျ။ မွဈကွတေဈလြှောကျ ရနေညျးရတာက ဆညျတှေ တညျဆောကျလို့ဆိုတဲ့ အခကျြကို တရုတျနိုငျငံက ငွငျးဆိုထားပါတယျ။
Eyes On Earth INC သုတသေန ကုမ်ပဏီကလညျး ဧပွီလတုနျးက တရုတျနိုငျငံဟာ မဲခေါငျမွဈ သဘာဝအတိုငျး စီးဆငျးမှုကို ကနျ့သတျပွီး တာတမံတှနေဲ့ မွဈရကေို သိုလှောငျခဲ့ တယျလို့ အစီရငျခံထားပါတယျ။ အဲဒီ အစီရငျခံစာကို တရုတျတို့ လကျမခံပဲ ငွငျးဆို ထားပမေဲ့ မနှဈက မုတျသုနျရာသီမှာ မဲခေါငျမွဈ ရမေကျြနှာ ပွငျက ၂. ၅ မီတာ သာရှိတာမို့ ပုံမှနျ ၇.၅ မီတာရဲ့ ၃ ပုံ ၁ ပုံသာ ရှိပါတယျ။
မဲခေါင်လူငယ် တီထွင်မှုပြိုင်ပွဲ (အပိုင်း ၂ )